I-Alternative Feed Ukulima kweMaggot ye-BSF • Yurie BSF
Ngaphandle kokuthenga ukutya
I-Maggot yondlo olongezelelweyo lweentlanzi kunye neenkukhu.
Ukuqinisekisa ukuba ishishini lakho lemfuyo liyaqhubeka likhula.
Ngaphandle kokuxanduva lokuthenga iipelisi
Indawo ye-BSF yeMaggot Ranch yanamhlanje ngaphandle kokuNuka
Ufuna ukwazi indawo esondele kwisixeko sakho?
Njani: Indawo yakho ngokuzenzekelayo efunyenwe yinkqubo iboniswe ngumqolo weenombolo zekhowudi zeposi.
Ngoko nqakraza ukukhangela.
Ukuba ufuna indawo echanekileyo, nceda ugcwalise i-colum engenanto idolophu / ilali apho ukhona ngoku.
Iindleko zokuThusha eziNgcaciso
Ukuvelisa ijoni elimnyama libhabhane izibungu lilula kakhulu kwaye lingabizi, singasebenzisa udoti, inkunkuma kunye nomgquba.
Umxholo opheleleyo wokutya, i-amino acids kunye neprotheni ephakamileyo kunceda kakhulu izilwanyana eziphilileyo zikhuthaza ukukhula kwezilwanyana ezifuywayo.
IZINTO EZIKHULULEKILEYO NGAPHANDLE NAMASELELL, Ukukhuphela mahala kuphephile kwaye kukhululekile. UKUSEBENZISA akukho kwimiboniso yoluntu kwaye iXHUMEKA kumafama.
I-BSF yeMaggot yanamhlanje ngaphandle kweBau ijolise ukuvelisa iindawo zokuloba iintlanzi kunye nokutya kweenkukhu.
Ukuhlakulela umlenze ochanekileyo kufuneka ube yintlaka, ngaphandle komshini, ngaphandle kweziyobisi kunye nokungenakutshelwa ukuze iziphumo zikwazi ukukhuliswa.
Ukhuselekile ngenxa yokuba ingabonakaliswa yintsapho kwaye ikhululekile ekuyifezeni.
Qhubekani Ukuhlakulela iMaggots
Izityalo zeMaggot zingaqwalaselwa kwaye zisetyenziswe kwi-maggot paste, umgubo wempuphu kunye namagundane emaggot okanye uhlala (magot amatsha)
Ngale ndlela unokuba nemfuyo eninzi ngaphandle kokuthenga ukutya kwintengiso kwakhona.
Ukufumana ama-pellets kunye nokutya kwesitolo.
Qhubeka ne sicelo seMaggot
Marketing Maggot? SITHETHA YURIE BSF !!!
Awudingi ukudideka malunga nokuthengisa kwamagogane.
Ngenxa yokuba u-Yurie BSF uya kuthenga.
Qhubeka nokuthengisa kweMaggot
UYurie BSF unikeze uRp100.000.000 uncedo olungakumbi lomhlobo / abantu ukuphuhlisa ishishini.
Iimali zoNcedo zinikezelwa ukwandisa amandla okuvelisa.
Qhubela phambili Amathuba Amashishini
I-AMBASSADOR YURIE BSF ilungele ukuba khona kwifama yakho.
KuYURIE BSF UNIVERSITY uya kunikwa uqeqesho oluphambili.
Ukuqinisekisa ukutshalwa kwe-BSF yanamhlanje ngaphandle kwevumba ngokuhambelana ne-SOP (inkqubo esebenzayo yokusebenza) yokulima kwe-BSF ngaphandle kokuvumba.
IYunivesithi ye-BSF BSF yaqhubeka
Isibambiso esisemthethweni somthengi nokuthengiswa kunye nokunye ukuphuhlisa ishishini.
Qhubeka nokuBambisana kwamaMagido ase-Indonesian
Yiba yinxalenye yoluntu lwase-Yurie BSF ukuba uhlakulele ngokubambisana ishishini leMaggot kwihlabathi lezolimo.
Eli nyathelo liyakwazi ukuhlangabezana neemfuno zeemarike zasekhaya nakwamanye amazwe.
Lolu hlelo lwe-CSR lujoliswe kulabo abafuna ukufunda, kodwa abanako ukufumana ipakethe yokulima ye-BSF yanamhlanje ngaphandle kovumba
Qalisa imisebenzi yemihla ngemihla ngomthandazo onyanzelekileyo ukuhambisa yonke imini noThixo.
Ngoko ke le nkqubo yeYuroe BSF yiyona nto kunye ne-NUMBER enye yazo zonke iinkqubo zomsebenzi.
Qhubeka U mthandazo
Kutheni Ababelethi Bathanda U-Yurie BSF
Ukufunda ukuhlakulela umququ ngaphandle kokucofa kulula kakhulu kwinkqubo eye yavavanywa ngempumelelo.
Isikhokelo esinikwe ngokwenene siphumelele kwimpumelelo yam kuquka ukuhlala kwisivuno somvunyi we-maggot
Umonde u-Mbak Yurie ondikhokeleyo ungokoqobo, ukuxakeka kwiofisi akuyona ingxaki kuba umphathi wongumonde
HOLA ukuchitha imali ukuze uthenge ama-pellets, i-99% i-catfish abalimi kunye nabanye abaphuma kwishishini ngenxa yokuba abanakho ukuxhasa imali enkulu yokutya efikelela kwi-60-70%, ukuba ungumqalayo weendleko zokuvelisa, ngokukodwa ukutya kukufikelela kwi-80%.
Jonga ulondolozo lweendleko zokukhupha iinkukhu ukuya kwi-82%. Ukwenza oku ngokwenza ukutya kwakho kweenkukhu kunye nezithako zomlingo, ezifana nomgubo wempuphu ukwenzela ukuba ukukhula kwakho kwenkukhu kuphezulu. Ixesha lokugcina imali kwaye ugxininise ekuqhubekeni ukwandisa inani lemfuyo yakho
Ukufunda naphi na
Jonga nje nge-video ye-tutorial tutorial ngokukodwa ukulima kwe-BSF ngaphandle kovumba.
Indlela yokukhuphela isicelo se-Yurie BSF ku-Playstore.
Qhubeka nendlela yokwenza iMaggot
Khuphela indlela yokwenza
Maggot for Feed Feed
Ukufumana iziphumo eziphezulu kumaggot we-BSF, ngaphambi kokuba unikezwe njengeentlanzi kunye nokutya kweenkukhu, sincoma ukuba uqale uyiqhube:
Ukutshatyalaliswa okutsha / okuphilayo
Indlela yokwenza iMaggot yokutya kwezilwanyana
Iindlela ezikhawulezayo zokufunda ukuhlakulela amaMoggots angenangqondo.
Enye yemingcipheko yokuphumelela yintloni yokubuza, u-Yurie BSF unikezela ngeenkonzo ezizodwa zabathengi, ukuphendula izinto malunga ne-maggot ishishini kunye nobuchule bokusebenzisa umbane.
Biza ngoku kwakhona
Wonke umntu uyazi iimpukane. Ezi zinambuzane zizungezile. Ziza kuba zivumba umthombo wokutya ovumba. Ngaphandle kwezi mpukane ezivuthayo, nazo zithwala izifo zesifo esifana nesifo sofuba (isifo sofuba), i-dysenteryamuba, i-k'holera kunye nezinye izifo.
Ukusasazeka kwesi sifo ngokutya okudliwe ngabantu emva kokuhluthwa yizimpukane. Kodwa ngokwenene iimpukane zizisa ezininzi iinzuzo kubantu.
Izimpukane zihlobo lwesinambuzane (i-order order cyclorrapha diptera order), iimpukane ze-morphologically zinama-antenna amfutshane, zimbini zimbini zamaphiko okuthi i-wings wings seapsang kunye neebini zamaphiko amancinci anceda ukugcina ibhalansi xa ihamba.
Izifo zeeNkathazi zeeNkathazo
Kutheni iimpukane zibizwa ngokuba zizifo ezinambuzane nezifo? Kungenxa yokuba xa iimpukane zingena kwindawo engcolileyo, ngoko malunga ne-125.000, iintsholongwane ziya kushiywa apho zihlala khona.
Oku kwenzeka ngokwemvelo ngenxa yendlela ekhethekileyo yokutya iimpukane. Xa behamba ngokutya, ngaphambi kokuba baqale ukutya iimpukane baya kukhupha umkhuhlane emlonyeni wakhe.
Imisebenzi ye-Fluid njenge-enzyme eyenza ukuququzelela ukugaya ukutya. Lo mjelo wokuhlanza ushiywe ekudleni kwaye ukuba udliwe ngabantu ungabonakala kwizifo ezahlukahlukeneyo.
Izinto Ezibalulekileyo Ngezimpukane
Izimpukane ziza endlwini kuba zivumba imithombo yokutya. Ukuze uyisuse, gcina ukutya kwisitya apho izimpukane zikwazi ukuhlala khona.
Ukufumana ukutya, iimpukane ziyasebenza ngelilanga. I-fly inxhomekeke kwimihlobo yayo inokuvelisa phakathi kwamaqanda e-75-126 kunye neentshontsho kwiintsuku ze-1-4.
I-Biologically, imfutshane ye-5 iya kuhlengahlengisa i-biologically, kwaye xa idliwa ngabantu, iya kubangela ukurhoxisa njalo njalo.
Umjikelezo wobomi bendiza uhluka, phakathi kwe-5 ukuya kwii-30 iintsuku. I-BSF ihamba ngokukhawuleza malunga ne-5-8 ngemini ngelixa iifuksi ezihlaza zifikelela kwi-30 ngosuku.
Iintlanzi zendlu zingabhabha ngejubane malunga ne-XNXX km ngeyure, oku kubangela ukuba udoti okanye ukutya esikugxothayo kungekudala kuya kuphuma.
Ngokukodwa kwimihlaba apho iintlobo zeentaba zizalela.
Izinzuzo zeempukane kubantu
Into esetyenziselwa kwiintlanzi yintsimi yabo, edlalwa ngokuba ngamaphuphu okanye maggot okanye magot okanye i-magote okanye i-maggot okanye inqabileyo okanye iyalula-njalo kwaye njalo njalo.
Kwamanye amazwe iimpukane zithengiswa ukusetyenziswa ngabantu. Banikela ngamamenyu akhethekileyo afana ne-pasta, isobho kunye ne-pizza.
Kwihlabathi lezonyango, iimpukane zezingane, eziyi-maggots okanye izibungu okanye i-maggot okanye i-uget-uget, zisetyenziselwa njengethuluzi lononyango lwezifo zangaphandle ezibizwa ngokuthi "unyango lomlingo".
Apho izibungu zifakwe kwinqwelana ukuze zidle isikhumba nenyama yezilonda eziphazamisayo ezitsholongwane, zibulale amabhaktheriya kwaye zidle isikhumba esifileyo. Ukwenza kube lula ngamayeza okugubungela amanxeba.
I-Magot iphinda isetyenziswe ngamapolisa ukufumanisa iminyaka yezidumbu kwiimeko ezithile zokubulala.
Enye inzuzo kukuba umxholo we-refilin i-gilin isetyenziswa rhoqo ngamaqela njengamathela. Amandla ayo okunamathela kunye nokunyaniseka kunamandla ngakumbi kuneemithi yomthi we-raber.
I-gene ye-refilin inokuphinda iphathe izifo ezahlukahlukeneyo zesifo segazi kunye ne-meina. Xa iimbilini ezimbini zivame ukuvimba ukuhamba kwegazi kunye ne-oksijini kwingqondo.
Ukongezelela kwimifuno yomhlaba kunye neebhaktheriya, izigubhu ziquka ukutshabalalisa i-oragnik, inkunkuma yendlu, inkunkuma yefektri, inkunkuma yabantu, imfuyo yemfuyo, izidumbu nezinye izinto eziphilayo.
Enye inzuzo abantu abaninzi abayithathayo kwiIndonesia iqhubekisa le miphunga ibe yondlo lwendalo kunye nolunye uhlobo lweentlanzi kunye neenkukhu.
Ngokuqhelekileyo umtshini uqhutyelwa kuqala kumaggotta, i-maggot pellets, umgubo wamagogane, umququ omtsha, umququ we-Chrispy, umlenze owomileyo, intonga yomlingo, umququ omnyiweyo, i-oven maggot njalo njalo.
Amalungiselelo omagumbi anikezelwa ngqo kwimfuyo okanye agcinwe njengezinto zokutya iintlanzi, iinkukhu kunye nokutya okukhulayo.
Ukusebenzisa umlingo wokutya kwezilwanyana zendalo kunye nale ndlela ngenxa yokuba umququ ucebile kwizondlo, i-amino acid epheleleyo kunye neeprotheyini eziphezulu. Iiprotheyini equlethwe kwii-40-56%.
Anatomy kunye neBiology
Imizimba eyahlukeneyo yeentukane. Ezinye zincinci, zinamanqatha, zinkulu kwaye zincinci kuxhomekeke kohlobo lwazo.
Ngokuqhelekileyo banakho ukukwazi ukuvumelanisa nokunyakaza emoyeni.
Inhloko yefuksi iqukethe amehlo amakhulu asemacaleni asekuncineni nentloko yentloko, i-antennae, i-ocelli, umlomo. Iliso linokuhamba kunye nentloko.
Izimpukane zine-neurons ezivelele ukunyakaza kunye nesixhobo sokulawula ulawulo lwenkcazo malunga nokuhamba okujikelezayo.
Ngoko ukuba iyanqwenela ukuqhuba ukunyakaza okuhambahambayo, ukujika nokujikeleza ngokukhawuleza ukuchonga umxholo wento.Akukho nanye kwiintlobo zeentaka ezinamazinyo.
Yintoni eyenziwa yizimpukane iinqununu ezincinci (impova) kunye nokutya okumanzi. Ngokuphathelele ukutya okuqinisekileyo abakwazi ukuyidla.
Kodwa ezinye iintlobo zeentlanzi ze-tabanidae zinomese emlonyeni wazo ukwenza i-incisions cross and suck blood.
Umsebenzi kukubamba amaphiko kwaye ube nezihlunu zendiza kwisigaba sesibini. Amacandelo omnye kunye namathathu amancinci. Kwiqendu lesithathu i-thorax ine-dumbbell njengonqabileyo xa ihamba.
Xa ukuxuba okanye ukulinganisa ubuso babo kwisimo esifanayo, kwaye indawo yesibhakabhaka sabantu ingaphezu komzimba wesetyhini.
Kungekudala emva kokuba isikhundla sokubambana sabuyela emuva. Umfazi okhulelweyo wesibhakabhaka umzali uya kufuna indawo kufuphi okanye ngaphezu kokutya ukubeka amaqanda.
Ngaphandle kohlobo lwe-BSF fly (i-Hermetia ilungile) eyenza amaqanda amaqanda angabi ngaphezu kokutya ngokuthe ngqo kodwa ajikeleze umthombo wokutya.
Indawo efunwa ngokubanzi kukuba inezinto ezininzi zokutya njenge-semala ukutya kwi-larvae.
Amaqanda amaqabunga aya kuvalwa ngokugqithiseleyo kwimiba yeeyure ngelixa ahluke kakhulu kwiintsuksi ze-BSF ezifuna iintsuku ze-2-4 ade amaqanda aphule.
Iintlobo zeeFlies (iintlobo ze-drosophila)
Iintlanzi zezilwanyana (i-sarcophagidae)
Iifukane ezihlaza (calliphora vomitoria)
Iintshulu zeehashe (intsapho ye-tabanidae)
Iintlanzi zeNkunkuma (psychodidae)
Iintsuku zeNtshonalanga (i-spiriverpa lunulata)
Izimpukane ezisuka ekhayeni (musca domestica)
Iifolo ze-BSF (hermitia illucien)
Izimpukane zeziqhamo ziyihlazo kumafama kuba zivutha iziqhamo. Le ntlanzi ilula kakhulu ukuzala ngoba ukutya kutholakala kakhulu kwintsimi kwaye ixhaswa yimozulu efanelekileyo ye-Indonesian kubo.
Ngexesha lezimvula lezi ntlanzi zikhula kakhulu.
Iimpawu zeeNtshuzi zeZiqhamo
3 mm ubude bendiza
Umbala womzimba unobumba obomvu okanye ucoliweyo
Yiba nesisu esiswini xa uhamba ngokukhawuleza
Iqanda libunjwa njengenyanga
Amaqanda afakwa kumaqela phantsi kwekhumba okanye kwiilonda okanye iziqhamo ezingafanelekanga
Inani lamaqanda li malunga ne-15 yengqolowa
Amaqanda ayaqhawula emva kweentsuku ezimbini
Ubude be5 mm pupa
Isisu sinomgca we3
I-fly fly ikhomba ngakumbi
Isisu esiswini sininzi
Umjikelo wobomi ugcina iintsuku ze-16.
Iimvumba eziphilayo ziqhamo phakathi kwe-6-9 iintsuku
Iintsuku ze-7-30 iintsuku
Izimpukane zabantu abadala zihlala kwiiveki ze-2-9
Le ntshukumo ihlukile kwaye iyingqayizivele ngokuthelekiswa nabanye. Izimpukane zenyama zi-ovoviviparous, yiloo nto ababeka phezu kwamanxeba, ukungcola, izidumbu, ukubola kwezinto eziphilayo, njl.
Iimpawu zeeNtshontsho zenyama
Izimpukane zenyama yezilwanyana yi-larvivara
Ubude be-horse ye-6-14 yindiza
Unesiqhwenga esibomvu esifubeni
Inemizila emnyama ye-3 eya kwi-thorax
Yiba nesisu esibomvu esiswini
I-Fat Fly Life Cycle
Iintsuku ze-14-30 zinyama ubudala
Ngalinye ixesha ixesha lokuqala lokuqala liphuma phakathi kwe-40-80 izibungu
Zininzi iintlobo zeentlanzi eziluhlaza, ngokubanzi ziphakathi kwaye zikhulu. Kukho isisu esesiglasi, isilivere esicwebekileyo, eluhlaza kunye nobumnyama.
Ukuzaliswa kwezidumbu ezininzi zeentlanzi okanye inyama ebolile okanye imfucu yezilwanyana okanye ukutshabalalisa ukutya.
Iimpukane ezihlaza zineempawu ezingavamile, zifuna enye yesibini ukuba zibeke ii-bacteria kunye neentsholongwane ekudleni.
Iimpawu zeeNtshontsho eziMhlaza
Ubude bomntu okhulayo obomvu 1 / 4 "-1 / 12" intshi
Isisu sesibhakabhaka, isiliva elicwebekileyo, eluhlaza kunye nobumnyama
I-3 / i-4 enkulu yamathambo ama-intshi amakhulu
Iintsuku ze-7-12 iintsuku
Amaqanda amaqabunga amaqabunga aya kuhlutha ii-8-18 iiyure
Hlala kwindawo ebolileyo okanye iintlanzi, okanye umgquba wemfuyo, okanye inkunkuma yokutya. Ukungabikho ukuyeka ukubetha iimpukane zezilwanyana ezibangelwa ukunyuka kwezilwanyana. Uluma lubuhlungu kakhulu.
Iimpawu zeehashe zamaHhashi
Ubungakanani behashe elidala linyuka yi25mm
Amehlo akhe ahlaza okanye amnyama
Amehlo eempukane zeendoda zisondelelana
Amehlo e-fly fly ahluke kakhulu
Iholide yeFly Fly Life Cycle
Emva kokubeka amaqanda kakhulu njengezinto ze-100-1.000
Amaqanda ahamba ngamahhashi aya kuhlutha phakathi kwe-5-7 iintsuku
Umjikelezo wobomi weehashe ezidala ziphakathi kwe-30-60 iintsuku
Inkunkuma iqhuma okanye ilahla iimpukane okanye iimpukane zeemot. I-larva ithanda inkunkuma engcolileyo njengodaka.
Iimpawu zeeNtsana zeNkunkuma
2 mm Ukuhamba Kwexesha
Amaphiko azele iinwele
Amaqanda aya kuhlutha i-1-6 ngosuku
Iintsuku ze-10-50 iintsuku
Isigaba se-pupa se-1-3
Kukho iintlobo ezimbini zeentlanzi ze-Sand:
Le ntaba inobungozi kuba ibetha izilwanyana kunye nabantu abangabangela ukubola kunye nezifo ezahlukahlukeneyo. Njengomkhuhlane ophezulu.
Ukuhlala kwabo kummandla wonxweme, amahlathi emincuba, amahlathi kunye neefama zeefayili Le ntlobo yeentaka zisebenza ebusuku phakathi kwe-9-4 ngeeyure zasekuseni.
Uhlobo lweSing Sand
I-Phlebotomus (i-leishmania i-vastile vector)
I-Lutzomiya (i-leishmania i-vekicas vector)
Iimpawu zeeNtshontsho zeNtshonalanga
Grey yellow and pale
Ngaba unamehlo omnyama omnyama
Kudala, imilenze epholileyo
Xa ukuthula okanye ukuphumla amaphiko kuhlale kuvulekile
Umzimba namaphiko ahlanganiswe ngobumnandi obuhle
Ukuphakama okuphezulu okufikelela kwiimitha ezintlanu
Ukuvelisa amaqanda, iimpukane zamabhinqa zidinga igazi kwiilwane kunye neepes
Emva kokubekwa phakathi kwamaqanda amnyama a-30-50
Izimpukane zabantu abadala zi-10-11mm ubude
Imilenze emnyama ebomvu ebomvu.
Phinda ufike kwi-2 yeminyaka ubudala
I-Pupa okanye isigaba secocoon kwii-1-2 iiveki
Iintlanzi zeNdlu (musca domestica)
Iintlobo ze-fly fly home are the flys that are most around us and are vectors of disease. Indlu yababhinqa iqhuba ihlala iqabane kuphela.
Babeka amaqanda ngeenxa zeqanda ze-100 ekuhlahleni izinto eziphathekayo ezifana nokutya, izidumbu, okanye iimfesi.
Iimpawu zeNdlu zeeNtlanzi
Ubude bomntu omdala bubaleka phakathi kwe-5-8 mm
Unomgca omncinci 4
Ubuso bakhe buhlanganiswe ngeenwele ezilungileyo eziye zanceda ukuba zithande izitho
Ukuba nobunzima obunzima
Amehlo akhe anamawaka ama-lens avumela umbono obanzi
Iimvumba ezine ze-wing zine-tapered kwaye azikho ngqo (zenzeke)
Ubume bomzimba bufakwe kwi-intloko yentloko
Yiba ne-2 yokugcina umphumo womoya
Ubungakanani bombane bufikelela ku-12 mm njengomntu omdala
I-BSF indiza okanye isosha elimnyama libaleka okanye inkunzi yebhola emnyama inomzimba ophakathi kwe-15-16 mm kunye nomnyama.
Ijoni elimnyama linyuka kwiindawo ezinxweme ezitshatyalaliswayo kunye neendawo eziphantsi komhlaba zingakwazi ukuvelisa kakuhle. Ubukho balo kwimeko ekhulayo izityalo ezininzi, apho badla ngokusondeza intsingiselo yentyatyambo yobusi okanye umbethe wamasa.
Iyabonwa ngokuqhelekileyo kwizindlu kuba ezi mpukane azidli. Eyona nto ibonakala kwiindawo eziqulethe udoti oluninzi, inkunkuma kunye nendawo yokungenisa amaqanda. Ngesinye isikhathi umfazi omdala unako ukubeka amaqanda ama-185 - 1.235 amaqanda.
Umhlobo ophezulu: Stratiomyoidea
Iintlobo: iHermmetia iyayicacisa
Igama leBinomial: iHermmetia iyalula (Linnaeus, 1758)
I-Hermetia nigrifacies Bigot, i-1879
I-Hermetia incens Riley & Howard, 1889
I-Hermetia icacisa uCopello, 1926
I-Hermetia ichukumisa var. nigritibia Enderlein, 1914
Inkcazo yeeFly Flies
Iintshukumo ze-BSF ezindala zi malunga ne-16 mm (5 / 8 intshi). Le ntaba ephakathi nendawo inomzimba obumnyama.
Ngemibala evela emnyama, eluhlaza okwesibhakabhaka ukuya kwi-metallic eluhlaza esifubeni kunye namaxesha athile kunye nesicatshulwa sesisu esisibomvu. Isibini sesisu esiswini (isisu) sinendawo ecacileyo.
Ngomfanekiso obanzi bentloko kwaye amehlo amakhulu kakhulu. Ingaba i-antenna ephindwe kabini ubude bentloko. Yenza imilenze emnyama ye-6 ene tarsi ecacileyo.
Iphiko le-BSF lifakwe njenge-membrane. Kwaye ekuphumleni, amaphiko ahlanjululwe ngokukodwa kwisisu esiswini. Ijoni elimnyama liyabaleka.
Xa lijongwa ngokubhekiselele kubukhulu, umbala, kunye nokubonakala okufana neenqwelo kunye nezinto ezinjalo. Ngokukodwa kuba i-antenna ye-fly iyalulwa njenge-wasp.
I-Tarsi emva kwe-fly fly kunye neefestile ezimbini ezincinci "kwiifestile" kwisiseko esiswini esiswini.
Yintoni eyenza intlanzi ibonakale inobuncwane "obuncini bomlenze". Izibungu ezibhakabhaka ezimnyama azifani neempukane zendlu kunye neempukane eziluhlaza.
Abaninzi abaxhamle kwixhoba elibuyela emva kwabo bafana nabantwana babo okanye izibungu okanye i-maggot okanye ugethe ubale okanye umlenze.
Yiyiphi kamva ngamachiza, amapolisa, indawo yokudlela, izilwanyana ezikhulayo kunye neefama zentlanzi yeefama zentlanzi zifunyenwe ngokwemihlaba yazo.
Izizathu ze-22 zeBlackFriend Friends
1. Khu selekile kubantu
Umkhosi wamaNtsundu omnyama awuyingozi kwaye ukhuselekile kubantu. I-BSF engekho nto ihamba njengeempukane zendlu kunye neempukane eziluhlaza.
Umdala we-BSF unomlomo kodwa ungasetyenziselwa ukusela kuphela ukuba awuyiyo impawu yesifo kubantu. I-BSF iqhuma ayilanga okanye i-sting eyenza iphephile kubantu.
Ngethuba lobomi bakhe i-BSF ayidlanga, ukugcina ubomi babo babelala ijusi yentyatyambo kunye nombethe wamasa.
Yiyo eyenza i-BSF iphephile kubantu. Yingakho asifane sihlangane ne-BSF endlwini.
I-BSF ayiyi kukhupha izifo
Izimpukane zingena kwaye zibuyela ekhaya ziyizimpukane eziluhlaza kunye neempukane zezindlu eziyingozi kuba ziza kufuna ukutya kwaye zisasazeka izifo.
Izibungu zamadala kunye ne-BSF azibandakanyi kwicandelo lezilwanyana okanye izilwanyana. Ngokwahlukileyo, izibungu zamabutho omnyama zinyuka zidlala indima efanayo njengeebomvu ezibomvu.
Ngokuchithwa njengabatshabalali bemfucuza, inkunkuma kunye nomgquba onokutshabalalisa i-substrates kunye nokubuyisela izondlo kumhlaba.
I-BSF Larvae i-Protein Resources evuselelekayo
Ijoni elimnyama livutha i-larva (BSF) ngumthombo wokhuseleko oluzinzileyo (oluvuselelekayo) oluhle kakhulu kwiinkcubeko ze-aqua, ukutya kwezilwanyana, isilwanyana kunye nesondlo somntu.
I-Larva inesidlo esikhulu kakhulu esinokuyichitha kabini ubunzima be-substrate ngosuku olunye.
I-Larvae ingasetyenziselwa ukuhlalisa umnqweno wezindlu, izitya zodaka, i-trash yokutya ivenkile yokutya.
Kubandakanywa imifuno kunye neziqhamo, iimveliso zentengiso yezolimo kunye nenkunkuma yemfuyo kuquka umgquba wemfuyo kunye nenkunkuma yabantu.
2. Umlomo we-BSF "awufezekanga"
Ngokungafani neempukane zendlu, i-BSF ine "engaphelelekanga" inxalenye yomlomo ongadliyo kwaye ingadla kuphela amanzi afana neentyantyambo zamanzi okanye amazolo.
Ngenxa yokuba engadli i-BSF ayifuni ukutya kunye ne-enzyme yokugaya njengezinye iimpukane, ngoko ayifaki isifo.
Amajoni amnyama athambileyo awanomdla wokuza kumakhaya okanye ukutya kwabantu. Njengeenkunkuma kunye neeprovores, iimpukane zezilwanyana ezithwala amaqanda zinomdla ngakumbi ekudleni ukutya okanye kumanyolo.
Ijoni elimnyama lindiza aliyikubhabhisa ngokugqithiseleyo kwezinye iimpukane. Ijoni elimnyama lihamba linamandla angaphantsi ngenxa yokuba banako ukukhawuleza ukutya ukutya njengabantu abadala.
Ijoni elimnyama liyabaleka kwaye lithinteka xa lifika endlwini, kuba ayigwemeki xa ibanjwe.
Ijoni elimnyama liphaphaze ucoceko (ucocekile) kwaye ungalimi okanye uhlabe. Ukuphela kwendalo yokuzivikela ngokuchasene nabasemzini kukubaleka uze ufihle.
Ukunciphisa ijoni elimnyama lindiza labantu linga kwenziwa ngokucima i-pupa ngaphambi kokuba iqhube iindiza.
Enye indlela ukukhenkcela, ukomileyo, ngokuzondla ngokuzondla izilwanyana, izixhobo zokuqokelela indawo kwindawo yenkukhu yenkukhu yokutya okuzenzekelayo, okanye ukondla iintaka zasendle.
4. I-Sakti BSF indiza
Isandi esenziwe yi-BSF sinokuphinda siphinde ezinye iintlobo zeempukane. Yaye ukuba kukho iimpukane ezininzi kunye ne-bsf maggot kwindawo apho akukho zimpukane kunye nezinye izimpukane ezinokuzama ukuhamba.
5. Agent Decomposition Agent
Ngolunye usuku i-magg ye-BSF inokutshisa incinci ephindwe kabini, inkunkuma okanye inkunkuma yezilwanyana.
Oku kuthetha ukuba ukuba sibe ne-100 kg ye-mags bsf, i-200 Kg yenkunkuma iya kuphuma yonke imihla. Inkunkuma enokutshabalaliswa kuyo yonke into enkunkuma, inkunkuma, umgquba wemfuyo kunye nenkunkuma yabantu.
Umzekelo weMaggot Ukutya kweNkunkuma ye-Organic
Udoti wemarike (imifuno kunye neziqhamo)
Nkunkuma ye zi bhedlele
Imizekelo yeMaggot Feed Feed
Imizekelo yeMaggot Yokutya Iilwanyana
Umquba womvundla womvundla
6. Ucoceke ngaphandle kovumba
Njengemfuyo yemfuyo ngokubanzi iya kubangela ukuvumba. Ngokungafani netshuku ekhutshwe yi-bsf maggot ayibangeli nayiphi na iphunga.
Ukuhlaselwa kweMaggot kuncinci i-granules njengesihlabathi okanye ubukhulu be-maggot rectum.
7. Ungaphila kwi-PH Extrem
I-BSf izibungu ziyaziwa zinenkani kwaye zikwazi ukuhlala kwi-ph. Njengeeyure ezimbini-ezine ze-alcohol ecocekileyo, ityuwa, i-acids kunye ne-ammonia.
Kwiindawo ezibandayo okanye xa kungekho ukutya i-BSF maggot iza kuhlambalala, iya kulala kwaye ihlale ilele kwaye iya kuqhubeka kwakhona xa iqondo lokufudumala lomoya libuyela kwinto evamile.
8. Ucebile kwiZondlo kunye neProteyini ephezulu
I-BSI yeMagical iqukethe i-40-56% iprotheni engcolileyo, i-30-36% ether, i-15-16% i-ash, i-4.9-5.2% i-calcium, kunye ne-0.61-0.64% i-phosphorus kwifom eyomileyo.
I-larva ye-BSf isityebi kwizondlo, izalisekile kumxholo we-amino acid kunye neeprotheyini eziphezulu ngoko kukulungele kakhulu ukunikela ngokutya kwezilwanyana.
Imizekelo yeMiggots yokutya kwezilwanyana
Zonke iintlobo zeentlanzi
Zonke iintlobo zeenkukhu
Zonke iintlobo zeentaka
Zonke iintlobo zamaadada
9. Ulawulo lwendalo lwe-BSF
Umyinge weminyaka yobudala be-BSF kuphela nge-5-8 ngosuku kwaye unokufikelela kwi-14 ngosuku. Ngexesha lesigaba sokuphila seempukane zanamuhla zivelisa ngokutshatisa okanye ukuxhatshazwa.
Emva kokuqhathaniswa okanye ukutshata isosha elimnyama lindiza indiza kwimiba yeeyure ziya kufa. Nangona isosha elimnyama libaleka amabhinqa aya kufa emva kokubeka amaqanda.
10. Ukukhula ngokukhawuleza kakhulu
Ngokubonelela ngesondlo ngendlela yenkcitho, izitya okanye udoti, izibungu ezincinci eziye zatshitshisa ukufikelela kwisigaba sabantu abadala malunga ne-18 ngosuku.
Phakathi kwelo xesha kwiveki yesibini umzimba omkhulu we-instar ukhula kwaye ukhula 15.000 ngobukhulu.
Ukukhula okukhawulezileyo kwezibungu kubangela inzuzo kumalimi omhlaba, onokuvunwa kwaye anikwe imfuyo kwiiveki ezimbini nje.
Abalimi abaninzi banikela iigottshi zabo kwiiveki ezimbini kuba ukugqithwa kwezi zibungu akunzima kwaye kuyathandwa kakhulu yientlanzi, iinkuku kunye nezilwanyana ezinwabuzelayo.
11. Abakhiqizi abaninzi beegg
I-BSF yesibini inokubeka amaqanda phakathi kwama-185-1.230 amaqanda. Ezi maqanda zifakwa ngokungqalileyo phezulu kokutya okanye inkunkuma ngaphandle kokutya.
Inani lamaqanda lilingana nobukhulu bomzimba omdala we-BSF. I-BSF ebhinqa enesibindi esikhulu somzimba kunye namaphiko aphakamileyo inomgangatho ophezulu wamaqanda onokuqhathaniswa nezimpukane ezinamaqela amancinci namaphiko.
Emva kweentsuku ezimbini ukuya kwiintsuku ezine ezi maqanda ziya kukhwela kwi-1 instar magot kwaye zikhule zize zifake kwi-6 phakathi kweemibini ukuya kwiiveki ezintathu.
Kwiimeko apho kukho ukutya okwaneleyo kunye nokushisa komoya phakathi kwe-25-35 ° C. Ubungakanani bezambane ezitshatywe ngokutsha malunga ne-2 mm, ke bukhula ku-5 mm. kwaye emva kokutshintsha isikhumba sikhula kwi-1,5-2 cm.
I-maggot BSF inokutya into edliwayo ngabantu kwaye inokudiliza inkunkuma, inkunkuma kunye nokutya ngokukhawuleza.
Oku kulula ukwenza iMaggot BSF eveliswe ngabantu abaninzi emhlabeni. Olunye ulungelelwano ngumthombo wokutya kunye neendaba ezifumanekayo ngokubanzi kwindawo yethu kwaye zingatholakala ngokukhululekile.
Ukukhululeka kokufumana umthombo wokutya wamaggot kukuba kunjalo abalimi abaphuhlisayo bangaveliswa ngexabiso eliphantsi.
13. Akukho Mfuno Yomhlaba Omkhulu.
Ukuvelisa umgog ngokugqithiseleyo njengentlanzi kunye nokutya kweenkukhu akudingi umhlaba omkhulu. Singasebenzisa indawo yokupaka, ecaleni nangemuva kwendlu kunye nobukhulu bokuqala be-3x4 meter.
Nangona sele usuchwepheshe kwiimveliso zamaggot ze-BSF ezingenasiphelo, unokuzihlakulela ekhaya njenge-Yurie BSF umhlobo waseKebumen.
Kuba abalimi beentlanzi, iinkuku kunye ne-bsf maggot ezilwanyana ezixhamlayo zisetyenziselwa ukondla kwezilwanyana, kwaye ngokubanzi ziqhutyelwa zibe izidalwa zokutya.
Umzekelo weMaggot esebenzayo
14. Elula kwaye efanelekileyo
Ukuvelisa umbane we-BSF kulula kakhulu, okwaneleyo ukubonelela inkunkuma okanye inkunkuma engcolileyo kwisitya kwaye uyifake kwindawo engabonakali ngqo kwimvula.
Kwiintsuku ezingaphantsi kwe-BSF izikhukhula zingavuna kwaye zinikezelwe kwimfuyo. Indlela yefowuni iyasebenza.
Ngenxa yokuba umlingo we-BSF njengomntu omdala uza kushiya imithombo yongcola ukuya kwindawo emnyama nomileyo (ukuzivuna) ukucamngca nokutshintsha kwisigaba se-pupa ngaphambi kokugqitywa kwi-BSF.
15. Imithombo yeProtheni Imithombo
Ukuqonda ngokubanzi umgogu ngumthombo weprotheni onokubuyiselwa ngokukhawuleza ngokwemvelo.
Ukuveliswa kwemilenze okanye ukulima umlingo yindlela yokuvelisa iiprotheni ezivuselelekayo eziyimiphumo yokuqhubekayo yokuvelisa umququ.
Oku kuthetha ukuba i-BSF BSF kunye neendwangu zeMaggot zifumaneka kwendalo ixesha elide kangangokuba akukho mfuneko yokudideka kunye nokukhathazeka ngokuphuma kwezibonelelo.
Yingakho abalimi abanomdla bavelisa umbane njengeprotheni umthombo weentlanzi kunye neenkukhu.
16. Ubukhulu bekhalori
I-Maggot ineekhalori eziphezulu okanye umthombo wamandla ukuba xa kuthengiswa yimfuyo yenza iintlanzi okanye iinkukhu zikhule ngokukhawuleza.
Ngenxa yokuba imisebenzi yemfuyo ixhaswa ngeekhalori ezidliwe kwi-BSF maggot. Ngokucacileyo, iikhalori ngamandla adingekayo ngumzimba weentlanzi, iinkukhu kunye nezilwanyana ezinwabuzelayo kunye nabantu.
Ukuze ukwazi ukuhamba kwaye enze imisebenzi yomzimba ngokufanelekileyo ukuze umzimba unxamnye nokuhlaselwa kwezifo.
Ngokomzekelo, iimfuno zekhalori ze-catfish ngokubanzi njengoko i-9,2-10,1% ifuthe ukuhlangabezana nale mfuno ingafumaneka kwi-BSF umgogodla.
Maggot enomxholo we-fat 29,65 (Fahmi et el, 2007). Kodwa xa ibonwa kwinqanaba elidala, umququ unamaqela ahlukeneyo okunesondlo.
Usuku Lwezinto Ezimanzi Ezomileyo (BK) Iiprotheni ezinqamlekileyo (PK) I-Coarse Fat Coarse Ash
Ukubona umxhesho we-fat maggot ophakamileyo kakhulu kuneemfuno zeentlanzi (ngenxa yeminye imfuyo nceda ukhangele ukuze kungabikho kokutya okuninzi).
Kungcono ukuba i-magg ye-BSF isetyenziswe njenge-pasta, umgubo, i-maggot pellets njalonjalo.
Ukucwangcisa la magogotshi kumalungiselelo ahlukeneyo ngaphezu kokuphepha ukugqithisa okongezelelweyo izondlo ezingenanto kunye nokuba nefuthe elibi kwimfuyo. Kwakhona inkunkuma.
17. Ukuthembisa amaxesha amabhizinisi
Ukutya kwemfuyo yezilwanyana kunyaka kunyaka kukhulile i-6,2% -8,1% kwimveliso ye-2018 yokutya kwemfuyo ivaliweyo kwi-19,4 yezigidi ezigidi zokutya.
Inani elikhulu lokutya kwezilwanyana kufuneka lenze umveliso wamagogyu ithuba elikhulu.
Inzuzo kubahlakuli bamagog kuba ixabiso elincinci kwaye liphantse likhululekile, kwaneendlela zokuthutha, nazo zincinci kakhulu.
Xa kuthelekiswa nokutya kwezilwanyana, izithako ezisisiseko zifake umgubo weentlanzi kunye neendleko eziphezulu ekuhanjisweni kwezi zinto ezibonakalayo.
UkuFunda Ngaphandle koyila
Ukusuka kumacandelo athile, abalimi be-maggot banokuphumelela, kodwa ngokuqinisekileyo ukubonelela ngokutya okuncinci kunye nemigangatho yezilwanyana, kufuneka bafunde indlela yokuhlakulela umlenze ofanelekileyo ukuze kuveliswe amaninzi amaninzi ngokuqhubekayo.
Kwaye kufuneka iqondwe ukususela ekuqaleni, iqala ngokulima umlingo ngaphandle kokuvumba. Ukuze i-Maggot yakho yezolimo ifumaneke ngokukhuselekileyo kwaye ikhululekile ukuba ingabi nendawo.
Ekuqaleni singakwazi ukungena ngala mathuba kwiklasi elincinci okanye ekhaya.
Ukwandisa ulwazi namava ngokuqinisekileyo kusenza sibe nethemba lokuphuhlisa ishishini ngakumbi.
18. Isimo sezulu saseIndonesia esifanelekayo
Isimo sezulu eshushu kwaye
Ngemozulu yezityalo eziseTurkey, i-BSF (isosha elimnyama lindiza) idiza ikwazi ukuhlala kwaye izalise kakuhle.
Inzuzo yale mozulu yongqeleko kukuba yenza zonke iinkqubo zeMagfot BSF zanamhlanje zingabi nanye:
Ukuhlakulela i-BSF yeMaggot yanamhlanje ngaphandle kovumba lokunciphisa
Ukulima kwe-BSF yamaggotha ​​ngaphandle kwamanonela lula
Ukulima ngokutsha kwe-BSF Maggot ngaphandle kokuvumba kunenzuzo
Ukuhlakulwa kwama-bsf maggot wamanje ngaphandle kwesiphumo sesiphumo esheshayo
Ukuhlakulela amaMaggots ngaphandle koNcedo oluNcitshisiweyo
Isimo sezulu sezityalo zaseTurkey sisiza abalimi ukuba banciphise umthwalo wokuvelisa umlingo.
Xa kuthelekiswa namanye amazwe anamaxesha amabini amaxesha. Ukwenza i-drF fly fly ithatha amakhulu eemali zeemali kunye nazo zonke i-sophistication kunye nokukhanyisa ukuze ukushisa kwidrama kuzinzile.
Nangona e-Indonesia akuyimfuneko kuba imeko yemozulu e-Indonesia izinzile. Ngoko ukwenza idrama ngokuthelekisa i-11-2, akudingeki ukuba uchithe amakhulu emininzi yemali.
E-Indonesia ukwenza iidrama ze-BSF zanele ngeRp500.000-Rp600.000 imali.
Ukulima okungaqhelekanga kweMaggot
Ukuvelisa umgog, enye yezinto ezimele zilungiselelwe izibonelelo zendalo njengento ebalulekileyo yokwenza umququ.
Njengenkunkuma engcolileyo, inkunkuma, umgquba wemfuyo njl. Zonke izithako ezisisiseko zilula kakhulu ukuzifumana. Kulula ukufumana izinto ezisisiseko ukwenza iMaggot ifumaneke inzuzo ekuqaleni ishishini le-maggot elula.
Kwaye ezi zithako zifumanekayo ngokusondeza kakhulu. Khawubheke nje inqwaba yemfucuza kwiimarike, ezindleleni nasezindlini zokuhlawula impahla.
Ungakhankanyi utywala, inqatha yeoli yesundu elahliwe ngumnini. Kubandakanywa inkunkuma yezilwanyana ehlakazekile kwaye iphazamise imo engqongileyo.
Ngokufumaneka kwezixhobo zamagogane, ukwenza ukuba ibhizinisi le-maggot liphumelele.
Ukuhlakulela ama-Maggots angenasiphelo kuNcedo ngakumbi
Ixabiso eliphantsi lotyalo-mali lokuqala kunye nokulula kokufumana izinto zokuvelisa umbane kwenza i-maggot ishishini.
Kungenxa yokuba kuphela inkunzi encinci inokuqala kwaye ukufumaneka kwezixhobo eziqingqiweyo ezilula ukwenza kungenza iindleko zokuvelisa kunye nokuqhubeka kwezoshishino kunenzuzo kakhulu.
Ukuveliswa kweMaggot okungekho kamsinya Isiphumo
Ukukhula kwemaggot BSF kwiindawo ezinxweme ezitshatyayo ngokukhawuleza kakhulu kuqhathaniswa namazwe angewona amahlathi.
I-Maggot BSf kwiindawo ezitshatyalalisayo ziyakuthatyathwa kuphela kwi-18 ngosuku. Kwaye i-BSF izimbiza nazo ziya kuvuna xa ziveki enye kuphela.
Ixesha elincinane ekuveleni umququ kwiimeko zemozulu ezitshisa kakhulu luncedo kumafama ekuboneleleni ngokukhawuleza nangokuthengisa.
Ngoko ukutya kwezilwanyana kufuneka kufumaneke ngakumbi.
19. Ukuthatha Amandla Kuyo yonke indawo
Ukuvelisa umququ, kukho izixhobo ezininzi kunye nezixhobo ezifunekayo ezifunekayo ezifana nebhasi ye-BSF, isitya seqanda se-BSF, i-egg rack, i-biotong ukukhulisa umlenze njl.
Ukwenza iidrama ze-BSF akudingeki ukusebenzisa izithako ezintsha, Unokwenza iingqungquthela ze-BSF kwizinto eziphathekayo ezinkunkuma okanye izinto ezingasetyenziswanga ezifana neenkuni ezisetyenzisiweyo, intsimbi kunye ne-bamboo ekhaya.
Iinqaba ze-BSF zenziwe njengendawo yokuzalisa iimpukane ukuze bangabhabhanga yonke indawo. Ngokubonelela ngeengqungquthela ze-BSF, ngokuqinisekileyo umveliso weqanda ungaguquleka njengoko kufuneka.
Iinqwelo zeeqanda ze-BSF zinokusetyenziswa ngamabhasi, iibhakethi, izigulane ezisetyenziswayo, ukwesaba Amaqanda amaqanda athatywayo okanye avuna kwiingqungquthela ze-BSf adibaniswe kulezi zixhobo.
Eyilungelelwe ngokukodwa ukuze kulungiswe ngakumbi njengoko kulindeleke izilwanyana.
I-BSF Egg Rack
I-BSF yamaqanda amaqanda angenziwa njengento elula njengokhuni, i-bamboo kunye nezinye izinto ezinkunkuma. I-Biotong njengenkonkxa yokwandisa umlenze kwinkqubo emva kokuba amaqanda aphule aze adluliselwe kwi-biotong.
I-Biotong inokwenziwa ngeendlela zokukhwabanisa ezinjengezinto zokugubha umhlaba. Hlela phezulu ngo-3 ukuya kwi-4 ukubeka.
Ngaloo ndlela ukulima umlenze kunokwandisa umhlaba omncinci kwigaraji okanye kwididi yendlu ye-tohift.
I-Biotong nayo inokwenziwa ngamacandelo e-samente afakwe njengamanzi okuloba iintlanzi kodwa kuphela malunga no-30 cm ukuphakama.
20. Abafaki be-BSF bamahhala kunye namaqanda asemvelo
Iimpukane ze-BSF zihlala kuyo yonke indawo e-Indonesia. Indlela yokubonelela izithako ezisele ezisekhitshini kwi-container, abalimi be-BSF baza kuza bafake amaqanda kwizikhonkwane ezinikezelweyo.
Ngaphandle kwelinye iikhikhini kukho ezininzi ezingasetyenziswayo nje kuphela ukuba izithako zifakwe kwi-organic category kwaye aziyizo zityhefu okanye ziqulethe i-pesticides.
21. UkuHlaba kweMvelo kunye nokuSondeza koMoya
I-BSF inelizwi elinamandla lokuphambanisa indlu neempukane eziluhlaza. Ngoko ukuba kwi-media substrate esiyilungiseleleyo akukho mxube kwaye udibanise neempukane zendlu kunye neempukane eziluhlaza.
Oku kubaluleke kangangokuba iifama zethu zamagogwane ziyinyumba kwiimpukane eziphethe izifo. Akukho phunga, ikhuselekile kwaye ikhululekile kulabo abahlakulela okanye kwindawo ejikelezileyo.
22. I-Maggot BSF nguMhlobo weeNkukhu zamaFama
I-Maggot isondo elimnyama lindiza linokunciphisa kakhulu u-E. coli 0157: i-H7 ne-Salmonella enterica etholakala kumgquba wenkukhu.
I-Maggot isondo elimnyama linyuka ngokukhawuleza libulala ukungcola, iikhemikhali ezithandathu zezinto ezingcolileyo kwiiyure ze-24.
Ijoni elimnyama lihamba ngokukhawuleza linciphisa umthamo kunye nesisindo semfuyo. Ngendlela yamakoloni angamaqhekeza aphula ukutya kwaye adala ubushushu, okwandisa ukukhuphuka komgquba.
Iimali ezibalulekileyo ziguqulelwe kwi-carbon dioxide ekhutshwa ngamaggots kunye ne-symbiotic / mutualistic microorganms.
I-Larvae kwinkqubo yomgquba ibinciphise umthamo womququ nge-50%. Yaye ikwazi ukufikelela kwi-90% nge-BSF yangoku ngaphandle kwe-Bau yokulima ukusetyenziswa kunye no-Yurie BSF.
Ukusasazwa kweeFlies zeFSF
Olu hlobo lwaluqala ngokuvela kwi-ecotone ye-neotropic, kodwa kwimihla yamva nje sele isasazeka kuzo zonke i-continent, ziba zizonke.
I-BSF ikhona kwiindawo ezininzi zaseYurophu, kuquka i-Peninsula yase-Iberia, eningizimu yeFransi, iItali, iCroatia, iMalta, iIanary Islands kunye neSwitzerland.
I-BSF ingafumaneka nakwi-Afrotropic ekozon, ekozon e-Australasia, e-Eastern Cape ePalaearctic, e-Nearctic ecozon, eMntla Afrika, nase-Ekozon Indomalayan.
Izimpukane zezilwanyana ezindala zibeka amaqanda phakathi kwamaqanda e-185-1.235 kanye kanye. Ezi maqanda zihlala zigcinwe kwiintsikelelo okanye phezulu kummandla okanye ngasentla kwizinto eziphathekayo ezifana nomgquba okanye umquba kunye nokugxotha kwiintsuku ze-2-4.
Izibungu ezitsha nje ziyi-intshi ze-0,04 (1 mm) ubude, ezinokufikelela kwii-intshi ze-1 kunye ne-27 ukuya kwi-0,10 g ekupheleni kwesigaba seqhekeza.
Isigaba sokurhaxa sihlala ngeentsuku ze-18-22, apho isigaba sokuqala siphelela malunga neentsuku ze-7. Ubude bezithuba zokurhoxiswa zinganciphisa kwaye zandiswa phakathi kweenyanga ezimbalwa kwiqondo eliphantsi okanye ukungabikho kokutya.
Isigaba secocoon sisuka kwi-1 ukuya kwiiveki ze-2. Izimpukane zabantu abadala zihlala phakathi kwe5 - 8 iintsuku xa zinikwa ubusi okanye i-sugar java xa zithunjiweyo okanye isiselo esithandayo siyinambuzane endle.
Izimpukane zabantu abadala zihlala kunye neendawo zokugcina amafutha eziqokelelwe ngexesha lesiganeko.
Intshontsho ye-BSF inokupheleliswa ngokugqibeleleyo ekuhlaziyeni kwakhona ubukho bayo. I-metamorphosis epheleleyo ngumjikelezo wobomi okanye ujikelezo lobomi bezilwanyana ezinezigaba ze-4 ebomini babo.
Ngomnye umjikelezo wobomi BSF ithatha phakathi kwe-40-44 iintsuku. Ixesha lixhomekeka kwiimeko ezinjengeqondo lokushisa nokunakekelwa.
Intshontsho ye-BSF iyingqayizivele kuba umjikelo wayo wobomi kunezigaba ezininzi, oko kukuthi isigaba se-5 ngolu hlobo:
Isigaba somntu omdala ukunyuka okanye i-imago yinqanaba emva kokuba inkqubo ye-pupa ihlasele igobolondo layo. Esi sigaba sesigaba se-BSF siphepha singadli kwaye siphuze kuphela ngexesha lokuphila.
Intsha ye-BSF ihamba ngeemigodi zayo kwaye iphuma kwiibhokhwe zayo kuphela kwiiyure ze-12 ziya kukhula ngokukhawuleza zibe yimpukane yabantu abadala.
Iimpukane ezisandul 'ukutshaya ziza kuphuma kwinqabho yecocoon zinyuka zize zize zifumane imithombo yelanga kunye nokusela.
Ubudala bentshukumo yabantu abadala bude kakhulu, obuphakathi kweentsuku ze-5-8, oku kuchatshazelwa yimeko yemozulu, umswakama kunye nomthombo weziphuzo.
Emva komntu omdala ovuthiweyo BSF uhamba ngenjongo yokubambana okanye ukuxhatshazwa. Iimpukane ze-BSF zinamandla okusebenza ngempumelelo kwaye nje ngexesha elifutshane.
Isiselo esiyintandokazi ye-BSF
Isiselo esiyintandokazi ye-BSF ngumbethe wasentambama kunye neentyantyambo zokutshiza ubusi. Kwikholeji ekuthunjiweyo sinokunika ishukela yeJava njengenxalenye yobusi.
Ukwenza oku ngokutshiza i-liquid kwi-drum.
Kwinkqubo yokuxhatshazwa okanye ukuxhatshaza umzali wesilisa uya kufikelela kubhinqa. Kwinkqubo yokufikelela kwizityalo ze-BSF zezilwanyana zijikelezwa kwizinga elithile kwaye zisesigxina.
Isikhundla sendiza yesilisa ekuqaleni sihamba kwaye sihamba emzimbeni wesibhokhwe, sibhekene naso kwicala elifanayo, kodwa ngemizuzwana embalwa emva koko sitshintshana kwaye siyaphambana.
Kule nqanaba lokushisa kwebindi liba yinto ebalulekileyo indima ebushushu. Iqondo lokushisa elifanelekileyo kwiintambo ze-BSF kukubushushu kwe30 ° C.
Nangona i-BSF ayidingi ukutya ngexesha lokuphila kwayo, kufuneka isinike isiselo. Unyango ngokunika isiselo ngendlela yobusi kwiintukane kuza kwandisa umveliso weqanda.
Ukunika ubusi okanye amanzi okanye i-Javanese amanzi ashukela anika umphumo wokwandisa ubudala beempukane.
Kwaye kubonakala kwinani leentsuku zokongezwa kobomi bendiza kunye nenani leentsuku zokubeka amaqanda ngeempukane.
Inani leentsuku zokuLandiswa kweeNtshuku
Usuku lwe-10-11 ngumhla ophezulu wokufa kwe-BSF unikelelwe ubusi
Usuku lwe-5-8 ngumhla wokuphakama we-BSF ukufa owanikezwa ngamanzi okusela
Inani leentsuku zokubeka amaqanda aphaphazelayo
Umhla we-5 ngumhla wokuba ubeka amaqanda kwiintukane ezinikezwa ngobusi
Usuku lwe-7 ngumhla wokuba ubeka amaqanda kwiintukane ezinikezwa ngamanzi okusela
Ixesha eliphakathi kwemizuzu ye-10-30 yi-BSF yesibini ukubeka amaqanda. Ngomlinganiselo omlinganiselo phakathi kwezinto ze-546-1.505.
Ubunzima bamaqanda e-BSF phakathi kwe-16,2-18,9 mg kunye nesisindo ngeqanda phakathi kwe-0,027-0,032 mg. Ixesha eliphakamileyo lihlala libeka amaqanda phakathi kwe-11.00-15.00.
Iintsuku ze-BSF zezilwanyana zibeka amaqanda kuphela, kwaye zifa emva kweeyure ezimbalwa.
I-BSF engakumbi Ibhinqakazi
Iintsikazi ezinkulu ze-BSF zivame ukuvelisa amaqanda amaninzi ngokuthelekiswa neentukane zezilwanyana ezincinci ngobukhulu.
Amandla afanelekileyo okubeka i-flyflies ye-BSF iyenzeka kumswakama phakathi kwe-55-60%.
Izimpukane zabantu abadala ziza kutshata kunye ne-oviposition kwi-24 ° C (75 ° F) kwi-40 ° C (104 ° F) okanye ngaphezulu. Mayelana ne-99,6% oviposition kwintsimi ivela kwi-27,5-37,5 ° C (81,5-99,5 ° F).
Izibane ze-Quartz-iodine zisetyenziswe ngokuphumelelayo ukukhuthaza ukukhupha kweentlanzi ezindala. Kwiimeko ezitshatyalaliswayo, ukukhanya kwelanga ngokuthe ngqo kwintambama kunye nasemva kwemini kuya kukhuthaza i-BSF ukuba iqabane kwaye ibeke amaqanda.
Nangona ilanga elingathanga ngqo lingcono kwi-BSF ngaphambi nangemva kokuqhathaniswa.
Ukunyaniseka kwi-70% kuthathwa njengento efanelekileyo kuzo zonke izigaba zomjikelezo wobomi. I-substrate ibonakala ingafuneki kwii-cocoons, kodwa i-substrate ithathwa njengomlawuli womswakama obangela ukuma.
I-93% inqanaba le-fly hatching xa ubumanzi bugcinwa kwi-70%.
Umkhosi omnyama ubhabhise izibungu zingadliwa ngabantu. I-Larvae iyasebenza kakhulu ekutshintsheni amaprotheni, equle kwiiprotheni ze-56, i-calcium ecebileyo kunye ne-amino acid epheleleyo.
Kwiiyure ze-432, i-1 yamabutho amnyama athambile amaqanda atshintshe kwi-2,4 kg yeprotheni, oku kuthetha ngaphezu kwamaqanda e-45.000 kumaqanda e-1. Ngaloo ndlela, ingaba ngumthombo weprotheni ukusetyenziswa ngabantu.
Abavelisi iiprotheyini, kodwa iiprotheni ezingaguqukiyo ezidliwa ngabantu ziba ukutya okudliwayo.
I-maggot isinomdla esiphunga njengezambatho eziphekiweyo.
Isigaba seqanda senzeka kwii-2 - 4 iintsuku. Ukwahlukana kwexesha okwenzekayo kubangelwa kukushisa kunye nomswakama ojikeleze indawo yeqanda.
Ngokuqhelekileyo i-flyflies ze-BSF ziza kufaka amaqanda kwindawo enomdaka kwaye zininzi izinto eziphathekayo njengendlela yokuthanda abantwana babo xa zichithwa kamva abantwana babo "abahlupheki" kunye nokulamba.
Imizekelo yeendawo apho amaqanda e-BSF afakwa ngumzali we-BSF
Indawo yokulahlwa kwenkunkuma
Kwiqanda leqanda, iqela le-BSF yenyuka iya kuvelisa amaqanda amaninzi phakathi kwamaqanda e-185-1.235 okanye ebizwa ngokuba yiqela.
Ubume beqanda le-BSF li-oval kunye nobude malunga ne-0,7mm, xa okokuqala lubekwa ngumzali wesifazane, la maqanda ayamhlophe.
Kwaye ngokukhawuleza umbala uphendulela okwesibhakabhaka segolide. Ukwahlula amaqanda awanqambileyo okanye cha, indlela yokujonga okanye ukubona amaqanda e-BSF.
Ukuba umbala utshintshela obomvu (i-orange) kwaye ukuma kweqanda leqanda akusisetyenzisiweyo okanye kakubi.
Ngoko sinokuqiniseka ukuba amaqanda awanqambile aze aphenduke izibungu okanye izigulane okanye ama-magot okanye ulawule-ugethe.
Iimidiya zokufaka amaqanda e-BSF angabakho naziphi na izinto eziphathekayo ezinjengomdaka, inkunkuma kunye nomgquba.
Izibungu ze-BSF zisetyenziswa kakhulu ukwenza umquba okanye ukuguqula inkunkuma kwindawo yokutya kwezilwanyana. Ukuvunwa kwe-Prepupae kunikezwa njengokutya kweenkukhu, intlanzi, ihagu, iilzards, ii-turtles, i-dragons kunye neenja.
Izibungu ze-BSF zingenye yezilwanyana ezisebenzayo kakhulu ekuguquleni ukutya kwi-biomass. Ukongeza kwiprothini yokuvelisa, izibungu ezindizayo zivelisa nezinye izixhobo ezixabisekileyo ezibizwa ngokuba yi-frass (i-kasgot / i-maggot).
I-Kasgot yintsimi ye-ngqolowa engenakunqwenelekayo engasetyenziswa njenge-organic fertilizer. Izibungu ze-BSF ngaphambi kokungena kwisigaba somntu omdala (prepupa) ngeendlela ezi-6.
(Ingxoxo kule ngcaciso ilula kwiinqanaba ezintathu zokuncedisa ukuqonda nokuphucula ukwenza kwakho).
Kuphi kwisigaba sangaphambili se-larvae asisadli, kwaye angenanto yokutya kweengxenyeni zabo, izilwanyana zabo ziphendulela zibe zikhonkwane ezisetyenziselwa ukunyuka.
Isigaba sesibini kunye nesigaba
Isigaba sesithathu sesigaba
Isigaba soPhakathi I
Kule nqanaba lokuqala isilwanyana esincinci siya kuhamba ngokuthe ngqo kumthombo wokutya. Esi sigaba sokuqala se-Instar sezibungu zifuna iimfuno ezininzi zokutya njengesithako sokukhula kwayo.
Emva kwexesha le-1 - 2, isiqalo sokuqala siza kukhutshwa esikhumbeni size singene kwisigaba sesibini sesiqendu.
Kwisigaba sesibini sesiqhelo, izibungu zinobukhulu obukhulu obuphakathi kwe-4-5mm, ezineempawu ezifanayo njengesiqalo sokuqala se-instar kodwa sinomlomo okhulu kunesigaba sokuqala sokuqala.
Kubonakala kwinqanaba le-anterior spiracle enesincinci esincinci. Kwaye ukuhlaziya kwakhona kuya kuba yisigaba sesithathu se-instar esiya kubonakala ngakumbi.
Kwinqanaba lesithathu le-instar, izibungu ziphakathi kwe-15mm okanye zixhomekeke ngakumbi kunezibonelelo ezibonelelweyo (ezikhoyo).
Isigaba sesithathu se-instar se-larvae sele sine-cuticle kwaye sishukunyiswa ngokukhawuleza ukufumana indawo enomanzi kwaye ikhuselwe kwimvula kwaye ilanga ngqo likhula libe yi-pupa okanye i-cocoon.
I-prepupa yokufuduka kwimizi ehambayo isetyenziselwa ngumlimi we-maggot ukuzihlaziya i-prepupa ngokwayo.
Indlela yokuvuna ngokuzenzekelayo ngokubonelela isitya se-biotong esinendlela yokuhamba okanye ingakunika i-ladder evumela i-prepupa ukuba ivuke kwi-biotong kwaye iwele kwindawo yokuqokelela.
Iqondo lokushisa elifanelekileyo leemvumba likhule ngokukhawuleza yi30 ° C.
I-Maggot isondo elimnyama lindiza linamandla kwaye linokumelana neemeko eziphezulu ezichukumisayo kunye neqondo eliphezulu kunezibungu. Ijoni elimnyama libhabhise izibungu zingaphila ebusika.
Kwaye ijoni elimnyama libhabhane izibungu ziya kupheka ukuba inani labantu likhulu kakhulu, kwaye ukushisa okugqithisileyo kuveliswa ngama-microorganisms kumathinki enkunkuma okanye kumakhoba omquba.
Kwinqanaba le-prepupa, izibungu zinezicubu ezipheleleyo ezikhulayo zibe zizicubu ezivuthiweyo.
Kule nqanaba lihlala malunga neentsuku ze-7 kodwa liye lathonyelwa kukushisa kwindawo nganye. Ubushushu buphakathi kwe-26-33 ° C.
Kwinqanaba le-prepupa izibungu zombala womzimba we-larvae zijika emnyama. Utshintsho lombala kwiimvumba njengombonakaliso weemvumba zivuthiwe kwaye zilungele ukuphenduka i-pupa okanye i-cocoon.
Iimpompo ze-BSF zowesifazane ekukhuleni kwazo zikwinqanaba elide okanye elide elide kunezibungu zesilisa.
Ubunzima obuninzi beLestern Larvae
Kwaye izibungu zezilwanyana zikhulula ngakumbi xa zifaniswa nezibungu zesilisa. Kwinqanaba le-prepupa i-prepupa larva ngokwemvelo ishiya amajelo.
Khangela indawo apho intlambo ikhuselwe khona ekukhanyeni kwelanga kunye nemvula.
I-prepupa dialam inokufumaneka lula kwiimfumba zamagqabi, iipiliti ezinamathanga, iimfumba zombutho wezilwanyana, iipilisi ze-oludi ze-palm oil kunye njalo.
Oku kwenziwa ukwenzela ukuba ugweme izilwanyana ezifana nezinkukhu, intlanzi, iintaka, amadada, izinja, iigundane njalonjalo.
Kuba ezi zilwanyana (umhlambi) i-prepupa njengenkomo enomnandi kwaye ephakamileyo kwiprotheni. Olu lungiselelo lobomi bemihla ngemihla lubizwa ngokuba yimbewu okanye imithi.
Ukuba unobunzima bokufumana i-prepupa kwendalo. Enye indlela ukuthenga kumalimi omlingo.
Ikhwalithi yePupapa ayifani
I-Maggot yisilwanyana se-omnivorous, oku kuthetha ukutya nayiphi na into nje nje ngohlobo lwendalo.
Ukunika ukutya okanye ukutya kwiimvumba ukususela ekuqheleni ukukhula kube yinto ebangela ukuba umgangatho we-prepupa unamandla.
Ngaphezu koko, ezo zilungiselelo ziya kusetyenziswa ngenjongo yokuba ngabafuyi bahlwayelwe kwakhona.
Ukuba isondlo esinikeziwe kuphela kwindlela yokulahlwa kwemfucumfucu okanye umgquba wemfuyo okanye ibhontshi, ngokuqinisekileyo olu hlobo lwe-prepupa luya kuba ngumgangatho ophantsi njengokwe-infusion.
Olu hlobo lwe-prepupa lungcono kuphela xa lusetyenziswa njengempahla egqityiweyo. Akusiyo iinqwelo eziza kusetyenziselwa ukulima kwakhona.
Ukubonelelwa kokutya okuluhlaza kunye nokungabikho komfuziselo kuya kwenza ukuba i-prepupa ihlupheke ngenxa yokungaphumeleli kwezondlo kwaye ingasetyenziselwa njengeziqhamo.
Abahlaziyi beMaggot abangayiqondi kwaye banikezele ngokutya kwenzake kwaye bayithengise njengabahlaziyi bezinto eziza kubangelwa.
Oku kunjalo kuba abayiqondi. kwaye zijoliswe kuphela ekunciphiseni iindleko zonyango de ukuthengisa.
Kodwa kulabo abafuna ukuhlakulela nokuhlakulela i-BSF, akukhuthazwa ukuba uqalise ukulima kwemaggot ngokuthenga imbewu engakhathaliyo.
Ngenxa yokuba umntwana oza kuyithenga uya kutshalwa kwakhona. Ukulima kweMaggot okujolise ekuthengiseni iimveliso zeenkomo zeMaggot kufuneka ziqonde indlela yokuhlakulela ubugcisa.
Ngenxa yokuba iMaggot inomlingiswa "umthwalo wesisu".
Yintoni i-Gut Load?
Gut umthwalo yinkqubo apho izilwanyana ziphakanyiswa kwaye zondliwa ukutya okunomsoco ukwenzela ukuba zinike ezi zondlo kwizilwanyana ezibaxhobayo.
Eli gama lisetyenziswe ngokumalunga nokulungiselela umququ osetyenziswa njengomhlaza wokuhlakulela kwakhona.
Amaggots athengiswa ngokurhwebo ngenjongo yokurhweba kweefama kufuneka abe nexabiso elipheleleyo lokutya.
Ngokunikezela izibilini zokutya ngaphambi kokuba kwenziwe i-broodstock, i-prepupa iya kuba nekhwalithi efanelekileyo njenge-broodstock. Vice versa.
Gut umthwalo udlalwa ngokubonelela ngeziqhamo, imifuno, kunye neetroyi okanye ukutya okunokutya okugqibeleleyo.
Ezinye iimveliso zentengiso ziyafumaneka kwaye ziqiniswe ngokuthe ngqo kwimithwalo yemithwalo efana ne-M M okanye iMedia Maggot.
Iintlobo ezintathu okanye iimveliso ze-3 M sele zidibanisa i-carbohydrates, amafutha, iiprotheni, iivithamini, izityela kunye ne-fiber.
Kwinqanaba le-pupa okanye i-cocoon, isigaba apho i-pupae ephezulu kunomsoco. I-pupa yesifazana (i-cocoon) ikhula phakathi kwe-10% -15% inzima kunamadoda.
Zingagcinwa kwiqondo lokushisa kweeveki eziliqela, kwaye ukuba ufuna ukuwandisa ubomi be-pupa, ungazigcina kwiqondo lokushisa kwe-10-16 ° C.
Indlela yokufakela umlenze okanye umdaka we-pupa unokulungiswa kwisitya kwaye unikeze abezindaba njengengubo.
Oku kulandelayo kukuthelekiswa kwamacandatshini amahlanu asetyenziswa njengeengubo ze-pupa. okt ungasebenzisi i-substrate, isanti, umhlabathi we-humus, i-sawdust.
I-pupa kunye nomhlaba kunye ne-sawdust substrate ikhawuleza kunomhlaba okanye i-sawdust. I-hatch ekhawulezileyo yi-pupa enganikwa ingubo (i-substrate)
Ukushisa, i-BSF iqhube umjikelezo wobomi phakathi kweentsuku ze-8-11 kunye ne-29-30 ° C. Ukuphuhliswa kwamaqanda amakhulu kumaqondo ashushu ngaphezulu kwe-30 ° C.
Ukutya, Isixa kunye nophuhliso lweeqanda eziphaphazelayo zichaphazela kakhulu umgangatho wesondlo esinikeziwe. Umxholo womninzi kwisondlo, enkulu i-BSF Lalt. Vice versa. Iimvumba ezingadliyo ziza kupheleka okanye ziphumo eziqhelekileyo kakhulu amaqanda amancinci
Ukukhanya, ukukhanya okukhanya kubalulekile ekuphuhliseni iindiza ze-BSF. I-BSF ithanda indawo ekhanyayo
Imidiya, iMidiya kunye nomxholo ophezulu wezondlo uhambelana ngqo nomgangatho wamagog. Amajelo amnandi afana ne-M M (umlingo we-maggot media), ikhekhe ye-oli ye-palm (PKM).
I-BSF eyahlukileyo indoda kunye ne-BSF
Izimpukane zomzimba zincinci
Izimpukane zeephiko zamadoda zifutshane
Isisu esiswini se-3 ingxenye yesisu, kunye ne-6 kuma-female
Isisu sisisigxina kunye nesetyhini esicacileyo
Amadoda ayinayo ibhinqa lezesini zesini
Iingxaki zokulima kweMaggot
Ingxaki ebalulekileyo ekwakheni ukulima kwe-BSF yi-BAU. Nika ingqalelo kwiindlela zokulima ezichanekileyo nokuchanekileyo ukususela ekuqaleni.
Ukuba umlimi wakho umlingo uphunga, le ngxaki enkulu. Ngaphandle kokungakhathazeki ngenxa yokuba iphunga liyakwazi ukumema izilwanyana kunye nezilwanyana ezinjengeentlanzi, iimpukane eziluhlaza, iindiza, iinyoka.
Ukongeza kwintlekele, enkulu ingozi yokulima umlingo yintsapho kunye nokuboniswa kwendalo. Kukho amafama amaninzi afanelekile ukuba avalwe ngenxa yephunga elibangelwa yimifuno yazo.
2. Zincinci ziphumo
Ezinye iingxaki ezinkulu zizivuno eziphantsi kwepaneli kwaye aziqinisekanga ukufumaneka okuqhubekayo.
Ukujikeleza komjikelezo wokuvelisa umgogo kufuneka unikeze izibungu ze-BSF okanye amaqanda aqhubekekayo.
Isisombululo sokwakha i-BSF yamagoloni kwiindawo ezifana nokunikezelwa kwamaqanda ngokuqhubekayo ngokusebenzisa i sixhobo ezifana ne-biotong.
Ukukhwela ama-eggfrey angasebenzisa iiqhekeza zekhadibhodi, amaqabunga ebhanki omisiwe okanye ibhodi yeenqanawa ezithengiswayo kwiivenkile okanye iikopi.
Ijoni elimnyama linyuka likwazi ukuzala kakuhle unyaka wonke kwiindawo ezitshatyalaliswayo ezitshisayo okanye eziphantsi komhlaba, kodwa kwezinye iindawo zendawo, kufuneka izityalo zokugcina izityalo ukuze ufumane amaqanda ngexesha elipholileyo.
Ngoko sihlala e-Indonesia ukuba sinobuchule kwaye sikhuthele, akufuneki sikhathazeke ngale ngxaki.
3. Ukhetho olungalunganga
Akulunganga ngokukhetha uhlobo lwe-fly and maggot. Uninzi lwezilwanyana ezilinywayo ziimpukane eziluhlaza. Oku kufuneka kulungiswe ngokukhawuleza.
Ngenxa yokuba izimpukane ezifuneka ukuba zihlwaywe zivela kwijoni elimnyama zindiza endaweni yeentlanzi eziluhlaza ezenza izifo zesifo.
Ukuba unyanzelekile ukuba uthenge imbewu, uthenge imbewu ephezulu ye-BSF yemaggot ukuze iziphumo ziyanelisekile. Thenga iintlobo eziphezulu zamaggot ubomi.
Ukuba uthenga imbewu ngokungaqhelekanga iziphumo aziqinisekanga kwaye ekugqibeleni kufuneka uthenge kwaye uthenge kwakhona.
Musa ukuthenga amaqanda e-BSF athengiswa ngegrama. Kufuneka ukwazi amaqanda e-BSF athengiswe ngegrama kuthetha ukuba uthengisa amaqanda aphukile ngenxa yokuba "atyunjwe" kwindawo avela kuyo.
Amaqanda e-BSF athatyathwa aya kuphulwa. Ngoko uthenga amaqanda aphukileyo kwaye akayi kukhanda.
Ungathethi xa upakisha la maqanda athatyathwa ngokungakhathali okubangela amaqanda e-BSF aphule kwaye akayi kuhlutha.
Umthengisi wee-bsf i-kerok amaqanda ubonakala egosa ngaphezu koBugce Bruce Lee ongakwazi ukutshiza amaqanda ngaphandle kokuphulwa.
Isisombululo kukuthenga iiqanda ze-BSF nge "cluster" nganye eqhubekayo ngokuchanekileyo njengoko indawo yeeflethi ezindizayo zibeka amaqanda.
Oku kukuqinisekisa ukuba amaqanda ahambelananga kwaye awaphuli ukuze ikhefu lonke lithengwe endaweni yamaqanda aphukile.
4. Ifomula engalunganga
Ngaba isilwanyana sokutya esifanelekileyo ekujoliswe kuso ukugcina i-83%.
Ukuze sifinyelele oku, kufuneka sifunde indlela yokusebenzisa umgog kwiinkonzo zentlanzi kunye nenkukhu yokutya efanelekileyo.
5. I-Maggot yokuThengisa
Ufuna ukuyithengisa phi umgogbutha xa ukubonelelwa kokutya kukuzalisekile. Ufuna ukuyithengisa phi umlingo?
Isisombululo kule ngxaki ngokwenene kulula, kufuneka nje ukwandisa intengiso yeentlanzi okanye yenkuku.
Kodwa ukuba awukwazi ngenxa yezizathu ezithile, kufuneka uqale ukucinga malunga nokuba uthengise umlingo?
Isisombululo kulula, thengisa umtshini wakho ku-Yurie BSF, ngoku ufumana umlingo ngentengo yeRp7.000 ngekg.
Eli xabiso liphezulu kakhulu ngaphezu kweemarike ezikufutshane neRp4.000-Rp5.000 ngekg.
U-Yurie BSF uthenga ngentengo ephakamileyo yomlenze wakho ngenxa yokuba siyidinga ukuba iqhutywe ibe yondlo lwezilwanyana kwaye isasazwe kwiixeko ze-99 e-Indonesia.
Ukuba unomdla ekusebenzeni ngokuthe ngqo kwifama yesondlo esiseduze kwisixeko sakho, ungakhangela idilesi kule ndawo okanye utshintshe ngqo kuNks. Yurie kwi-0812-2105-2808.
6. A nga phuhlisi
Ukuphuhliswa kwamashishini amashishini. Ngokwemvelo, ukuba ekuqaleni ucinga nje ngokuvelisa umlenze.
Ekuqaleni, iinjongo kuphela zokunciphisa iindleko zokutya kwezilwanyana. Njengoko ixesha liqhubeka, izakhono zakho ziya kwandisa kwaye izityalo zemigodi ezongezelelekileyo ziya kuvuna.
Kubantu abathile, bafuna uncedo ukuze baqhubeke bekhula. Ngenxa yoko u-Yurie BSF uza kunye nenkqubo yokunika uncedo kubo bonke abahlobo baka-Yurie BSF be-Rp100.000.000 ngomntu kwaye ngokuqinisekileyo zilungelelaniswe neemfuno zoshishino.
Imfuneko yokufumana le mali kukuba kufuneka ugqibe umgogodla ku-Yurie BSF. Lo mnikelo kufuneka ubuyiswe ngokuthumela umgog-umgog ku-Yurie BSF.
Isixa sembuyiselo asixhomekeke kumdla kuzo zonke. Asimkeli iRIBA. Naluphi na ukubaluleka kwenkxaso esiyinikezelayo, akukho zithintelo zolawulo.
Emva koko uhlawula loo xabiso ngeMaggot.
7. A nga lalelwa
Umphathi wesigqeba oqinisekisa ukuba ukulima kwakho kukuphumelele. Isikhokelo sendawo sibaluleke kakhulu kuba iingxaki ojamelana nayo imihla ngemihla zifana "ezifanayo" kwiingxaki zamafama kwezinye iindawo.
Yilapho iprogram yeDUTA YURIE BSF idlala kwifama yakho. Ukubonelela ngesikhokelo ngqo ngokuhambelana nemeko kunye neemeko.
Nolu hlelo lwe-ambassador ye-Yurie BSF, awusoze wedwa. UKUBA SIPHUMELEKILE NGAKHO ngokuthatha izifundo xa sinombulelo wokunceda abanye ke impumelelo kufuneka ifike.
8. Akukho mgcini
Oko sikuthethayo kukukhokela de ukutshala umgog uphumelele kuya kuphumelela ngokwenene.
Amawaka ka-Yurie BSF bahlobo kuba beyazi ukuba ii-2007 ziphantsi ko-Yurie BSF. AKUNYE IZIXHOBO EZINYE EZIPHUMILEYO.
Ewe hayi, umgaqo wethu uphumelele kunye.Ukuba umngane onguhlobo lukaYurie uphumelele ngokwenene ke iziphumo zemaggot ziza kuthengiswa ku-Yurie BSF. Kuthetha ukuba sidinga omnye nomnye.
9. Iimarike ezimnyama
Unokubonelela njani ngokubonelela ngesondlo sezilwanyana kwaye ube yinxalenye yemarike yesizwe? Izidingo zokutya kwezilwanyana ze-2019 ziqikelelwa ukuba zi ngaphezu kwe-20-21 yezigidi zezigidi zokutya kwezilwanyana. Ithuba elibi kakhulu lebhizinisi.
Maggot kunye nomhlaba
Iifama zivame ukufumana izibungu endaweni yazo. I-Larva iyona nto ibhetele ekuphenduleni "inkunkuma enomsoco" kwisondlo sezilwanyana.
Iifomo zilungele ukuguqula izinto eziphezulu ze-cellulose (iphepha, amakhadibhodi, amaqabunga, izinto zokutya ngaphandle kwemithi) zibe zilungiso ezintle zomhlaba.
Imifuno yomhlaba ikhula kakuhle kwiimfucumfucu eziveliswa yimvumba ephaphazelayo, kodwa i-fluach fluid iqukethe i-enzymes kwaye ithambekele ekubeni yomelele kakhulu kwiimbungu.
Umsebenzi omkhulu unokugcina amaqondo afudumele apha nge-37 ° C (100 ° F), ngelixa iimbungu zifuna ukushisa okupholileyo.
Uninzi lweenzame zokwandisa inani elikhulu leempethu ngeempompo kwisitya esifanayo, ngexesha elifanayo aliphumelelanga.
Iifomo zingaphila phantsi kwelahlwaya xa izantsi ziphantsi komhlaba. Iibhokhwe zikwazi ukuhlala kwinqwelo yeenkunkuma xa ininzi yezibungu zingekho.
Iibhokhwe zingenakongezwa ukuba inani labantu abaqhwithileyo linciphisa (ebusika) kwaye iimbungu zingakhutshwa kwiqotshu inkunkuma ngelixa zilinde amaqanda ezimpukane zempi zasendle.
Njengomsoco, izibungu ze-BSF aziwa njengemibhobho ye-intermediary for worms that infect the birds, ngelixa izibungu ebomvu zingumkhosi wemfuyo emininzi.
ENtshona KumaAfrika, i-Dirhinus giffardii ifumaneke njenge-parasitoid evela ku-pupa H. ibonisa kwaye iyanciphisa umveliso weqanda.
Okubangela ukunciphisa isitokisi ukuya kwi-72%. Ezi zinyango ziqhutywe ngamanyathelo kunye namanyathelo okuphepha kufuneka athathwe ekukhuseleni indawo yokukhulisa i-larval ukusuka ekuhlaselweni kwe-wasp.
Zininzi iindlela zokuhlakulela umlingo. Imidiya eyahlukeneyo ingasetyenziselwa ukuvelisa iimfudu ezinjengotshwala, inkunkuma kunye nomgquba.
Naliphi imidiya esetyenziswayo, khetha imidiya elula ukuyifumana kwaye "ikhululekile".
Akukhuthazwa ukusebenzisa imidiya ngokuthenga ezifana nokusebenzisa ibin.
Ukuhlakulela umgog wegran media ngaphezu kokugqithiswa komgogodla ogqithisileyo uphantsi. Ngenxa yokuba umxholo wesondlo kwi-bran uphantsi.
Uhlobo lweMaggot Ukulima iMidiya
Ukulima kweMiggot yezoLondolozo lweeMfuyo
Ukuhlakulela i-Maggot Media Waste
Enye indlela yokuhlakulela umququ ngokusebenzisa umgquba wemfuyo.
Ukulima kweMaggot kunye nomgquba wemfuyo yindlela efanelekileyo yokuvelisa umlenze omkhulu ngeendleko eziphantsi.
Yiyiphi imfuyo yomfuyo inokusetyenziswa njengendawo yokulima umlingo.
Ngokomgaqo, yonke imfuyo ingasetyenziselwa njengemidiya yokulima imithombo. Ngoko akukho sizathu sokuthenga umlingo we-maggot media media.
Imizekelo yomgquba womlingo wokulima umlingo
Ukulima kweMaggot kunye nemidiya evela kwi-tofu yamagundane okugaya i-pulp, okanye inkunkuma yamasundu iphakanyiswa kakhulu kuba ngaphezu kokuvelisa izigulane eziphezulu.
Kanye kunye nesisombululo sokungcola kwe-tofu inkunkuma ephoswe emlanjeni.
Ngokufanayo kunye nenkunkuma yeoli yamaqatha engasetyenziswanga kwaye iphonswa kwindawo yesityela samafutha. Nangona udaka lwesundu lwamafutha luhle kakhulu njengendlela yokulima umlingo.
Imizekelo yenkunkuma kwimidiya yokulima imithombo
Ikhefu le-Oil Oil
Inkunkuma ye-Organic yinkinga yangoku yendalo, kwaye iyayifaka yonke indawo. Unokuba ngumlimi wokulima umlingo.
Ukulima kweMaggot kunye ne-media media kunconywa kakhulu ngenxa yokuba iziphumo zilungile kwaye zikunceda ekuxazululeni iingxaki zenkcitho.
Ingxaki yenkunkuma yinkinga yehlabathi, kungekhona kuphela e-Indonesia.
Iba yinto ephakamileyo kakhulu ukuba sinye yezona zinto ezincinci ukukunceda ukuxazulula ingxaki yokulahla ngokusebenzisa le nkunkuma kwiimveliso kwizolimo zomlingo.
Iimveliso eziMveliso zeMaggot
Ekuhlaleni umlingo ubuncinci siza kuvelisa iimveliso ezivela kwimveliso
Maggot kunye neNkqubo
Umququzeli oMzimba weLiquid
I-KasGot (yangaphambili yomgog) yincinci (njengesihlabathi) ukungcola kumaggot ubungakanani bokuvula umlingo wesilumkiso. I-KasGot ivela ekudleni okudliwayo okudliwa ngumgog kwaye uphonswe kwi-maggot rectum.
Le nkqubo ibizwa ngokuba yi-vermicomposting. Umgangatho wesikhalazo uxhomeke kakhulu kumzekelo wesondlo wesondlo. I-Kasgot ayixhomekeke kuhlobo lwezinto eziphathekayo ezisetyenziswayo.
I-Kasgot iqulethe izakhi kunye nezivithamini. I-Kasgot yinto enhle kakhulu ekuphuculeni izondlo zomhlaba, ukukhula kunye nemveliso yeziqhamo nezityalo.
Isichumiso se-Kasgot sinomsebenzi onokukhuthaza ukukhula kweengcambu zezityalo. Kwaye ezi ziindaba ezilungileyo kubafama kuba ziye zabonakaliswa ukuba ziphumelele ekuphuculeni umgangatho wokuveliswa kweqabunga kunye nezityalo zezityalo.
I-Kasgot ityebile kwizinto zeHara
I-Kasgot eyenziwa kwinkqubo yokuxilongwa komzimba womlenze okanye i-vermicompost icebile kakhulu kwizondlo ezifunekayo ukuze kuveliswe umhlaba.
I-Kasgot iqulethe izondlo ezipheleleyo (macro and micro chemistry). Kwinkqubo ye-kasgot, sele iqhutywe kabini kwinkqubo yokuqhawuka kwemicimbi yendalo.
Okokuqala, ibalulekileyo ebhaktheriya ngaphambi kokutya umlenze. Okwesibini, inqubo ngumgog uqobo, okuyiyo xa umcimbi wezinto ezidalwayo ngaphakathi kwisisu somlingo.
Yiyiphi i-downcomposition in the process through metabolic processes. Ngenxa yoko, i-maggot iyaziwa njengenjini engcolileyo.
Iimpawu zeekhemikhali kwi-cassava zikulungele ukuxutywa yizityalo kunye ne-cassava equlethe i-microbes kunye nokukhula kwezityalo ezikhuthaza ama-hormone, ngoko banokunceda ekukhuleni kwezityalo ngokukhawuleza.
Inani elikhulu lemibonakalo kwi-cassava lenza ukukhawuleza ukukhululwa kwezondlo kwiifom ezifunekayo izityalo.
Ukuthelekiswa kweN, P, K POC KasGot (iMaggot esebenzisa)
2 Ukukhangela 1,38 4,23 1,22
3 Umgquba wenkomo 0,96 0,68 1,68
4 Umquba weHama 0,49 0,73 0,83
5 Umgquba womgquba 2,72 6,32 2,03
6 Iidonki 0,84 1,81 0,42
7 Umgquba 0,61 0,31 0,18
8 Umgquba womgquba 1,24 1,83 0,74
Umxholo woMququzeleli we-Organic Kasgot
Umxholo osemthethweni womlingo uxhomekeke kumthombo wokutya owenziwe kumagog.
Ukutya okungafaniyo, izinto ezahlukeneyo ezinomsoco kwi-kasgot. Kodwa ngokuqhelekileyo umxholo wesondlo se-kasgotti ungolu hlobo lulandelayo:
I-nitrogen (N) 0,63%
I-Phosphorus (P) i0,35%
I-Potassium (K) i0,20%
I-Magnesium (Mg) 0,26%
I-sodium (Na) i0,07%
I-Iron (Fe) 0,79%
I-Molybdenum (Mo) 14,48%
41,23% kunye namandla okugcina amanzi
Izinzuzo zefomati yomgcini
Ayingabizi kuba izithako ezenza isichumiso esingafakiyo zingumququzeleli wezinto ezizungezile.
I-Cashmere isichumisi ayinakonakalisa umhlaba kuba ikhululekile yeekhemikhali. Oku kwenza i-cassava isichumiso ingasetyenziselwa ngokuqhubekayo kwaye ayibangeli iziphumo ezimbi zomhlaba okanye izityalo.
Ukulahlekelwa komanyolo waseKasgoteri
Ukusebenza kwezityalo akukhawulezi nje njengamaqhekeza angabonakaliyo. Ngenxa yokuba i-cassava isichumiso senziwa ngokwemvelo.
Unceda ukukhula kwezityalo kunye nokuvelisa izityalo zezityalo, izityalo kunye neziqhamo. Unceda ukuphucula ukubonakala kwezityalo ukuba kube nzima.
Umbala weentyatyambo, ukubunjwa kunye nokuhamba kwimizimba kungcono. I-Kasgot yinto enhle njengomxube weendaba ezikhulayo kwii-nursery.
Iqukethe ama-hormones ukuphucula umhlaba, impahla kunye neyendalo. Ukhuselekile ukusebenzisa ixesha elide kuba ngaphandle kwemichiza.
Isisetyenziso sokusetyenziswa kwamafomati aseKasgotti
Umanyolo we-Kasgot kwi-pot 1kg i-cassava exutywe nomhlaba we-3kg, ngelixa umhlaba omkhulu 6-10 kg cassava nganye 10m2
Ubungakanani be-cassava buxhomekeke kwintlobo yesityalo kunye nenqanaba lokuzala lomhlaba ukuba luzaliswe.
Umququzeli weMaggot weLiquid
Ukuxhamla umququzi wendalo umququzeli we-maggot (i-POC) kukuba uninzi lwe-nitrogen, i-phosphorus, i-potassium kunye nomthamo wamanzi, iqulethe ukukhuthaza ukukhula kwaye inokuthintela ukufika kwezilwanyana ezinambuzane ezahlukeneyo.
Ubume kunye neempawu zesichumisi esichengileyo semveliso
Umququzeli womquba ococekileyo kufuneka udibanise. Ngenxa yokuba i-kasgot ziza kugcinwa ixesha elide kumajelo aseburhulumenteni, sebenzisa i-kasgot.
Nangona isondlo se-maggot egciniweyo isichumiso esiphezulu kakhulu sokukhukhula kwamanzi kwaye siphuma.
Kodwa kukho iingenelo ezahlukileyo xa usebenzisa i-POC maggot elula ukugaya ngamagqabi kunye nezityalo zezityalo kwaye isebenza njengomgqugquzeli wezityalo kunye nokukhula kwembewu.
Ngokukodwa xa amaqabunga neziqhamo ziqala ukuhluma. I-Maggot POC ilungile ngenxa yokuba ingafakwa ngokuthe ngqo kwi-stomata okanye i-pores.
Ukunika i-POC Maggot kufuneka inake ingqalelo kwisilinganiselo ukuze ungadluli ngaphezulu kwaye ubangele ukufa kwizityalo.
Izityalo ngokuqhelekileyo zingathabatha izondlo ngaphandle kwe-2% ngosuku.
Isisombululo sokusetyenziswa kwe-POC Maggot
Yongeza i-POC ngamanzi acocekileyo. Emva kokuxuba ukutshafafaza kwamanzi, ukuxinwa akukho ngaphezu kwe-2% okanye kuyo yonke i-1 ilitha ye-POC maggot exutywe kunye ne-100 yamanzi wamanzi.
Ukuchithwa ngexesha lokutshintshwa kwesigaba ukususela kwimifuno kuya kuvelisa okuvelisa iziqhamo, imbewu okanye izilimo.
Shedyuli ukulawulwa kwe-POC maggot kanye ngeveki ngexesha lonyaka owomileyo. Xa ixesha liqala, hlawula zonke ii-3 kanye ngosuku kuba i-POC ichitheka ngamanzi emvula.
Umthamo we-POC maggot kufuneka uhlengahlengiswe kwisityalo sesityalo esinikwe i-POC maggot.
Isivuno ngendlela ye-prepupa okanye i-maggot larvae kufuneka iqhutywe kuqala kumalungiselelo ahlukahlukeneyo.
Oku ukongeza ekukhuliseni isivuno sinokugcinwa ixesha elide. Kwaye isetyenziswe xa kufuneka.
Ukutya kwezilwanyana zeMaggot
Ngaba iMaggot ingasetyenziselwa ukutya kwezilwanyana? Esinye sezondlo kwi-maggot yiprotheni,
Kwaye le protein iyadingeka yonke imfuyo kunye nabantu. Ngoko ke iziphi izilwanyana ezinokunikwa umlenze. Impendulo yonke imfuyo edinga iphrotheni yezilwanyana.
Kuphela nje ukuba amanqanaba eeprotheyini ezifunekayo kwisilwanyana ngasinye asifani. Ngenxa yoko, isisombululo kukusebenzisa i-maggot kumalungiselelo athile kuqala.
Ziziphi iiprotheni ezinqanaba ezilawulwayo ngokweemfuno zemfuyo.
I-Maggot iyilungele ukutya kweentaka
Inyoni yaseChakak Inwele
Iintaka Ziyakhupha iChakak
I-Maggot ilungile kwi-inkukhu yokutya yenkukhu
Inkukhu e Mhlophe
Wido inkukhu okanye iJalak
Isigqeba Esihle Ukulungiselela Ukutya Kwezilwanyana Zenkukhu
Ihlathi Elibomvu Ikhukhu
Inkukhu yeCotton (Silkie Hen)
Umdlalo we-Ayam wamanqamanamhlanje
Inkukhu Yenkomo Ephule
Inkukhu yasePoland okanye iPoland
Igajethi Efanelekileyo ye-Kampung Chicken Animal Feed
Maggot omuhle wee-Animal Feed Feed
Inkukhu yaseYiputa yaseFayoumi
Inkukhu Yenkululeko Yenkukhu
I-Giant Jersey yenkukhu
I-Chicken Turken (i-Naked Neck)
I-Maggot ilungele ukondla inkukhu
I-Chicken Buff yaseOpington
Inkukhu yasePlymouth Rock / iDredred Rock
Umgogodla Olungele Ukutya Okusendle
Dumbo Catfish Imfuyo
Sangkuriang Catfish Imfuyo
I-Maggot iyinto enhle yokutya i-tilapia
Maggot omuhle wokutya kweenkomo zaseKork
Ikhonkco uCanna Barca
Ingwenya uChanna Bleheri
Ingqungquthela yeCork Diplogramma
I-Microgelte yeCork Channa
Ingqayi uCanna Pleuro
Umgogodla Olungileyo Ukutya Kwezilwanyana Zedada
Inkabi yaseDagelang yaseDuck
ITegal Duck yaseKhaya
I-Mojosari ibhinqa leenkazana
I-Buff Duck Cattle
I-Cirebon Duck okanye iRambon
IDunner Runner Duck
Inkabi yeDuck yaseKhaki
Isigubungela Esihle KwiMfuyo Yezilwanyana Zempiliso
I-Maggot Efanelekileyo I-Arowana Yondlo lwezilwanyana
Umgogodla Olungileyo Ukutya Kwezilwanyana ze-Koi
Ufuna ukufunda ukufunda
Hlola i-99 Indawo ye-Ranch
Uluntu lwaseYuroe BSF